မဆုံးတဲ့ ….သီချင်း—၁၈ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » မဆုံးတဲ့ ….သီချင်း—၁၈
Posted by naywoon ni on Jul 27, 2011 in Drama, Essays.., My Dear Diary | 1 comment
ဒီကဗျာမှာ အပျိုမဆိုတဲ့ အပုဒ်ကိုဖြုတ်လိုက် နောက်ဆုံးစာပုဒ်ကို ပြင်လိုက်ရင် ကဗျာလို့ ပြောလို့ဖြစ်ပြီ..။ ခုတော့ နေ၀န်းနီရဲ့ စကားလုံးကို ကုလားဖန်ထိုးထားတဲ့ ကဗျက်ပဲ ဖြစ်နေသေးတယ်..။ တစ်ပိုဒ်ချင်း အနေနဲ့ ကောင်းချင်နေတယ်..။ အဆက်အစပ်က ဟနေတယ်..။ ပြီးတော့ လောကမှာ ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာ ရှိကိုမရှိဘူး..။ အချိန်တိုင်း အချိန်တိုင်းမှာ တစ်ခုခုတော့ ဖြစ်နေတာပဲ..။ ခုနေ၀န်းနီ အရက်သောက်တယ်..။ လင်းသူ အရက်သောက်တယ်..။ အရက်သမားနှစ်ယောက် ဖြစ်နေတယ်..။ မင်းကဗျာ ရေးတယ်..။ င်ကဗျာရေးတယ်..။ ကဗျာသမားနှစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်..။ မောင်နေရေ.. မင်းတို့လို့ မော်ဒန်ဖြစ်အောင် ဖြစ်ညှစ်ရေးတဲ့ သူတွေ များလို့ ကိုလေးအောင်က ဘာပြောခဲ့လဲ သိလား မြန်မာပြည်မှာ ခွေးလေ ခွေးလွင့်တွေ ပြီးရင် ကဗျာသမားအပေါ ဆုံးပဲတဲ့..။ ဒီတော့ ကဗျာ တစ်ပုဒ်ရေးရင် အချိတ်အဆက်မိအောင်ရေး..။ တစ်ပုဒ်လုံး လှဖို့လိုတယ်..။ အဓိပါယ် ရှိဖို့လိုတယ်..။ အများနားလည်ဖို့လိုတယ်..။ မော်ဒန်ပဲ ဆိုပြီး ရေးချင်သလိုရေးလို့မရဘူး..။ အရေးကြီးတာက အားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်ဖို့ လိုတယ်..။ တစ်ယောက်ထဲ ခံစားရပြီး အများအတွက် အကျိုး မရှိရင် အလကားပဲ..။ ပြီးတော့ စာစုံအောင်ဖတ်..။ စာမဖတ်ဘဲနဲ့ ရေးလိုက်တဲ့ စာကိုဖတ်ရတာ ကလေးနဲ့ စကာပြောနေရသလိုပဲ..။ “
အဲဒိလို စကားတစ်ပြောပြောနဲ့ တစ်ခွက်ပြီး တစ်ခွက် သောက်လာလိုက်တာ နောက်တစ်လုံးပြောင်သွားပါရောလား..။ အပြင်မှာ မိုးတွေရွာနေတယ်..။ အခန်းထဲမှာတော့ မီးချောင်ထွန်းထားလို့ လေလုံပြီး အိုက်စပ်စပ် ဖြစ်နေတယ်…။ ညကိုးနာရီလည်းကျော်ပြီ…။ ဆိုင်ရှေ့မှာ ကိုဇောလည်း ဆိုင်ပိတ်နေပြီ..။
အဲဒါနဲ့ နှစ်ယောက်သား ဖန်ခွက်တွေ အမြည်းခွက်တွေ သယ်ပြီး ရှေ့ခန်းထဲကို ရွှေ့လာခဲ့တယ်..။ စောစောက စကားပြောရင်း ကိုလင်းသူ ရှေ့ထွက်သွားတာ ခုမှသိတယ်..။ သူ့ညီကို အရက်ထပ်ဝယ်ခိုင်းထားတာကိုးးး။။ ကောင်တာပေါ်မှာ ဂျင်တစ်လုံးရောက်နေပြန်ပြီ..။
“ ဒီနေ့မှ နေ၀န်းနီ ဆိုတဲ့ကောင် အရက်သမားဖြစ်တာ..။ ဒီလိုသောက်နိုင်မှ…။ လာဒီကို………..”
တဲ့..။.. ကိုလင်းသူက ပြောပြီး ဆိုင်ရှေ့ထွက်သွားတယ်..။ ဆိုင်ရှေ့မှာ မိုးဖွဲလေးတွေ ကျနေတယ်..။ သူကရှေ့ထွက်သွားပြီး မိုးပေါ်ကို လက်ညှိုးထိုးပြတယ်..။ ဘာလဲ …ပေါ့..။ နေ၀န်းနီ ဘုမသိ ဘမသိ မော့ကြည့်လိုက်တယ်..။ ဘာမှမတွေ့ရဘူး..။ ဒါပေမဲ့ မျက်နှာ ပေါ် ကျလာတဲ့ မိုးစက်တွေက လူကိုလန်းသွားစေတယ်..။ အေးစက်တဲ့မိုးရေ စက်တွေနဲ့ အဆီပြန်နေတဲ့ မျက်နှာ ထိတွေ့သွားတာကို ..။ အမူးနဲနဲပြေသွားသလို စိတ်ကိုလည်း လန်းသွားတာပေါ့…….။နေ၀န်းနီက…
“ ဘာလဲအကိုကြီး” ….ပေါ့..။
“ မင်း၇ဲ့ အရက်ဆီ ပြန်နေတဲ့ မျက်ခွက်ကြီးကို မိုးရေခံ ခိုးင်းတာ ဟေ့…။ “
တဲ့..။ လေအေးအေး လေးကလည်း တိုက်နေတော့ ရပ်နေရင်နဲ့ အမူးပြေသွားသလို ပိုမူးလာသလိုပဲ…။
“ ညီဇော် ကော..။ သောက်ချင်သောက်နှင့်လေ..။ ကိုကြီးတို့ လေညှင်းခံလိုက်ဦးမယ်..။ အမူးပြေသွားအောင်..။ ငှက်ပျောသီးပေးပါဦးကွ…။ နေ၀န်းနီကိုလည်းကျွေ.း.။ ဖီးကြမ်း ငှက်ပျောသီက အရက်သမားရဲ့ဆေး ကွ..။ သိလား…။ “
ကိုဇော်က ဖီးကြမ်း ငှက်ပျောသီးတွေ ဖြုတ်ပြီးလာပေးတယ်..။ နေ၀န်းနီကိုလည်း လာပေးလေရဲ့..။ အရက်သမားရဲ့ ဆေး တဲ့ နေ၀န်းနီလည်း အခွံ နွာပြီး စားလိုက်တာပေါ့..။ ဆေးလို့ ဆိုကိုး…….။
“ ငှက်ပျောသီးကို ဖြေးဖြေးစား အရသာခံပြီးစား ..။ရေသောက်..။ ၀ိတ်လျော့..။ အရက်သမားဟာ အစာတင်ဂရုစိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူး..။ ဆီးနဲ့ ၀မ်းကိုလည်း သူတစ်ကာထက် ဂရုစိုက်ရတယ်..။ အချုပ်မခံရဘူး..။ ဆီးချုပ် ၀မ်းချုပ် လေချုပ် မခံရဘူးပေါ့..။ “
ကိုလင်းသူက ပြောပြန်တယ်..။ အင်း..။ သူကနေ၀န်းနီရဲ့ ဒုတိယ ဆရာ လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်..။ (ကိုလင်းသူကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ…။ 2000 ခုနှစ်လောက်က ကွယ်လွန်သွားပါပြီ..။ )
သူပြောသလိုလုပ် ကြည့်တော့လည်း စောစောက မူးနေတာပြေသွားသလိုပဲ..။ ၀မ်းထဲ အစာလည်း ၀င်သွားပြီကိုး ..။ ငြီးစီစီ ဖြစ်နေတာလည်း မိုးရေနဲ့ ထိလို့ လန်းနေတယ်..။ လူကပူထူနေသေးတယ်..။ ထုံနေတယ်..။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားရတာက လေဟာနယ်ထဲ ရွှေ့နေရသလိုကြီး……။
ကိုနေရေ……. အရက်တောင် ပြန်သောက်ချင်စိတ်ပေါက်လာပြီ……. ငှက်ပျောသီး အမြည်နဲ့………. ခုလို မိုးဖွဲဖွဲလေး ကျနေတဲ့ညမျိုးဆိုရင်. အင်းးးးးးး